Raspberry Pi Zero 2 W inosvika iine simba rakawanda uye dhizaini gadziriso | Linux Addicts
Darkcrizt | 28/10/2021 15:39 | Yakagadziridzwa ku 29/10/2021 00:43 | Noticias
Iyo Raspberry Pi Project yakavhurwa chizvarwa chinotevera chebhodhi Raspberry Pi Zero 2W, kubatanidza compact zviyero neBluetooth uye Wi-Fi kuenderana uye inogadzirwa mune imwechete miniature fomu factor (65 x 30 x 5mm), inenge hafu yehukuru hweRaspberry Pi.
Musiyano kiyi pakati peiyo nyowani Raspberry Pi Zero modhi ndiyo shanduko yekushandisa Broadcom BCM2710A1 SoC, iyo iri padyo neiyo inoshandiswa muRaspberry Pi 3 mabhodhi (muchizvarwa chakapfuura cheZero mabhodhi, iyo Broadcom BCM2835 SoC yakapihwa, sepakutanga Raspberry Pi).
Kusiyana neRaspberry Pi 3, processor frequency yakaderedzwa kubva ku1,4 GHz kuenda ku1 GHz kuderedza kushandiswa kwesimba. Tichitarisa kubva kune yakawanda-yakarukwa sysbench bvunzo, SoC kusimudzira inobvumirwa kuwedzera mamaboard kuita ne5 nguva (Iyo SoC itsva inoshandisa 53-bit quad-core Arm Cortex-A64 CPU panzvimbo yeimwe-musimboti 11-bit ARM1176 ARM32JZF.)
Sezvazvakaita mushanduro yapfuura, Iyo Raspberry Pi Zero 2W inopa 512MB ye RAM, Mini-HDMI chiteshi, maviri Micro-USB ports. (USB 2.0 ine OTG uye chiteshi chemagetsi), a microSD slot, imwe 40-pini GPIO yekubatanidza (pasina soldering), composite vhidhiyo uye kamera pini (CSI-2).
Ndiro ndiro vakapakata Wireless chip inoenderana nayo Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4GHz), Bluetooth 4.2 uye Bluetooth Low Energy (BLE). YeFCC certification uye dziviriro kubva mukukanganiswa kwekunze, iyo isina waya chip pabhodhi nyowani yakafukidzwa nesimbi casing.
Iyo GPU yakabatanidzwa muSoC iri inoenderana neOpenGL ES 1.1 uye 2.0, uye inopa midziyo yekumhanyisa dencoding yevhidhiyo muH.264 uye MPEG-4 mafomati ane 1080p30 mhando, uyewo encoding muH.264 format, iyo inowedzera huwandu hwekushandiswa kwebhodhi nemichina yakasiyana-siyana uye multimedia systems yeimba yakachenjera.
Zvinosuruvarisa Saizi ye RAM inogumira ku512MB uye haigone kuwedzerwa nekuda kwekukanganisa kwemuviri kwehukuru hweplate. Kupa 1GB ye RAM kunoda kushandiswa kweakaomesesa akawanda-layered dhizaini, iyo vanogadzira havasati vagadzirira kuita.
Dambudziko guru paRaspberry Pi Zero 2W bhodhi dhizaini yaive mhinduro kudambudziko renzvimbo yendangariro LPDDR2 SDRAM. Muchizvarwa chekutanga chebhodhi, chiyeuchidzo chakaiswa muchikamu chekuwedzera pamusoro peiyo SoC chip, yakashandiswa uchishandisa PoP (package-on-package) tekinoroji, asi mumachipi matsva eBroadcom iyi nzira haina kukwanisa kuitwa nekuda kwekuwedzera kweSoC. saizi. Kugadzirisa dambudziko, yakasarudzika vhezheni yechip yakagadzirwa mukubatana neBroadcom, umo ndangariro dzakabatanidzwa muSoC.
Rimwe dambudziko raive rakawedzera kupisa kwekupisa nekuda kwekushandiswa kweprosesa ine simba. Dambudziko inogadziriswa nekuwedzera zvidimbu zvakakora zvemhangura kubhodhi kuti ubvise uye ubvise kupisa kubva kune processor. Nekuda kweizvi, uremu hwetafura hwakawedzera zvakanyanya, asi iyo nzira yakaonekwa seyakabudirira uye yakazova yakakwana kudzivirira kupisa pakuita LINPACK linear algebra unlimited time stress test at room temperature ye20 degrees.
Pamidziyo inokwikwidza, yepedyo ndeyeOrange Pi zero Plus2 inoyera 46x48mm uye inodhura madhora makumi matatu neshanu ne35MB ye RAM uye Allwinner H512 chip.
Kusvika pari zvino, kutengesa kwakangotanga muUK, European Union, US, Canada neHong Kong; Kuendesa kune dzimwe nyika kunozovhurwa kana iyo isina waya module inosimbiswa. Mutengo weRaspberry Pi Zero 2 W imadhora gumi nemashanu (yekuenzanisa, mutengo weRaspberry Pi Zero W bhodhi imadhora gumi uye Raspberry Pi Zero imadhora mashanu, kugadzirwa kwemabhodhi akachipa kuchaenderera mberi) .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi Zero 2 W inosvika iine simba rakawanda uye dhizaini gadziriso
Wakawana kusagadzikana muLinux kernel tty subsystem